Vaovao - Mampifandanja ny fomba fiasa fiarovana ny vano
Ny fitsipiky nybalance crane
Ny fitsipiky ny "balance crane" dia vaovao.Ny lanja mavesatra mihantona eo amin'ny farango vano mizana, tazonina amin'ny tanana, dia afaka mihetsika amin'ny sitrapo amin'ny fisaka sy ao anatin'ny haavon'ny fanandratana, ary ny bokotra elektrika hisintonana ny fisandratana dia apetraka eo amin'ny farango mba hahatonga ny lanja mavesatra. ny motera sy ny transmission.
Ny opérateur dia mitazona ny pendant amin'ny tanana iray, ary manodinkodina ny pendant mba hampiakatra, hanodina ary hihetsika araka izay tiany, toy ny tanana mihalehibe, izay ampiasaina malalaka.Mazava ho azy fa mbola misy hery kely eo am-pelatanana, izay entin'ny teoria sy ny tsy fitoviana tsy tanteraka.Ohatra, ny dingana, ny fametrahana fahadisoana, ny tena fisian'ny deformation sy ny seza lalina tokony ho sy ny sisa.
Fampandehanana ny vano mizana
nybalance cranedia tena ahitana tsanganana, lohany, sandry sy ny fifindran'ny ampahany, miaraka amin'ny rafitra mirindra sy tsara tarehy endrika.
Ny fampifandanjana ny vano miaraka amin'ny "fandanjan'ny herin'ny maizina" dia mahatonga ny hetsika ho malama, mitsitsy asa, tsotra ary indrindra ampifanarahana amin'ny fikarakarana matetika, ny fivorian'ny fizotran'ny paositra, afaka mampihena be ny hamafin'ny asa, manatsara ny fahombiazany.
nybalance cranemahatonga ny fivoriambe ho mora sy haingana, marina ny fametrahana, ny fitaovana dia ao amin'ny habaka telo dimanjato mihantona ao anatin'ny kapoka voamarika, ary ny fitaovana dia azo ahodina miakatra sy midina, ankavia sy havanana amin'ny tanana.
Ny bokotra fanaraha-maso rehetra dia mifantoka amin'ny tànana fanaraha-maso, ary ny tantana miasa dia tafiditra amin'ny fitaovana fiasana amin'ny alàlan'ny fitaovana.Ka raha mbola manetsika ny tahony ianao, dia afaka mihetsika miaraka aminy ny fitaovana fiasana.